I-brand yangaphandle ye-Kathmandu yazisa ngeprojekthi yeesetyhula
I-brand yase-New Zealand esekwe ngaphandle yase-Kathmandu isebenzisene ne-The Renewal Workshop, umboneleli ophambili wezisombululo zetyhula, ukukhaba iprojekhthi yemephu ejikelezayo yokubonelela ngeenkqubo zokuhlaziya kunye nokucebisa kubathengi bayo kwixa elizayo. Uhlobo luye lwabongoza amashishini efashoni ...Funda ngokugqithisileyo »
Ifashoni yeZipho ezilungileyo isishwankathelo sokupakishwa kwakhona kwefashoni
Imfashini yokuLungileyo, iqonga lolondolozo lwefashoni oluzinzileyo, iYunivesithi iUtrecht kunye noManyano lokuPakisha oluZinzileyo, babhale ngokubambisana iphepha elimhlophe elinikezela ngesishwankathelo sokupakisha esinokuphinda sisebenzise kumzi mveliso wefashoni. Inika ingqwalaselo ephambili yokwamkelwa ngokubanzi ...Funda ngokugqithisileyo »
Umsonto weChampion uqalise umgca weRenu we-100% wokuphinda usebenzise imisonto yokuthunga
Ikomkhulu le-Gastonia, iChampion Thread Inkampani (i-CTC), umboneleli wehlabathi wentambo, umsonto, kunye nezinto ezahlukeneyo zemveliso ethungelweyo, usungule umgca weRenu kuyo yonke indawo, imisonto yokuthunga ehambelana nokusingqongileyo enziwe ngokupheleleyo kwizinto ezingezizo ezentombi. Iipesenti ezili-100 zerisayikliphu ezisetyenziswayo ...Funda ngokugqithisileyo »
INDLELA ELUHLAZA Imveliso yendwangu eyolukiweyo iqinisekisa ukhuseleko kunye nendawo ecocekileyo, ngaloo ndlela iqinisekisa imodeli yeshishini yexesha elide kuzo zonke iinkampani ezichaphazelekayo. Itekhnoloji yakutshanje kunye neendlela ezilungileyo ezisetyenzisiweyo zikhokelela kuncedo lokhuphiswano ngelixa kwangaxeshanye kunciphisa iziphumo kwi-env ...Funda ngokugqithisileyo »
Iqela le-H & M, inkampani yaseSweden yamazwe ngamazwe yokuthengisa iimpahla, iazise inkqubo entsha yokupakisha iphepha enokusetyenziswa kwakhona kwaye iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe. Ngokuthenga kwi-Intanethi kukhula kwihlabathi liphela kwaye ngaloo nkunkuma yeplastiki, i-H & M iziva isidingo sokufumana isisombululo sokupakisha okuzinzileyo. I ...Funda ngokugqithisileyo »
Urhwebo lweempahla luqala ukubonisa ukubuyiswa kwi-COVID-19
Idatha yorhwebo yengubo yakutshanje (izahluko 61 no-62 zekhowudi ye-HS) zityhila zombini ifuthe le-COVID-19 kunye neempawu zokubuyiselwa kwecandelo, ngokweSebe lezoLimo laseMelika (USDA). Ukubuyiselwa kwe China ngokukhawuleza kunakwamanye amazwe. Nangona kunjalo, isantya sokufumana kwakhona kumthengi ...Funda ngokugqithisileyo »
Amaxabiso ekotoni ehlabathi ngoku agqithe amanqanaba obhubhane wangaphambili
Amaxabiso ekotoni ehlabathi, ebekade enyuka ngaphambi kwesifo, abuye ngamandla ukusukela ngoJanuwari ukuya ku-Epreli, ikamva le-NY lehla laya kwiminyaka eli-10 ephantsi. Nangona kunjalo, amaxabiso ahlanganisiwe kwaye ngoku agqithile kumanqanaba angaphambi kobhubhane njengokusetyenziswa kwemitshini kunye nezinye izinto ezixhasa amandla akutshanje.COVID-19 ...Funda ngokugqithisileyo »